Wenzhou Kangrun Sanitary Wares Co. , Ltd ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၁၃ နှစ်အကြာတွင်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများနှင့်ပြင်ပရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများကိုကျွမ်းကျင်သောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်လာရန်တီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ ယ်သူများအားသန့်ရှင်းသောထည်နှင့်ပြင်ပအပန်းဖြေထုတ်ကုန်များကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းချက်ပေးရန်ကတိပြုသည်။
စတုရန်းမီတာ ၂၀၀၀ ကျော်ရှိသောမြေ၊ ၈၀၀၀ စတုရန်းမီတာအလုပ်ရုံများ၊ အရည်အချင်းပြည့်မီသောအင်ဂျင်နီယာများနှင့်လုပ်သား ၁၅၀ ကျော်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တီထွင်ဖန်တီးမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအလွန်ယုံကြည်မှုရှိသည်။
ဆယ်နှစ်ကျော်အဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပြီးနောက် Kangrun Sanitary Wares သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်သန့်ရှင်းသောအသုံးအဆောင်များနှင့်ပြင်ပရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့်ထိပ်တန်းဖြစ်လာသည်။
သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းနယ်ပယ်တွင် Kangrun Sanitary Wares သည်၎င်း၏အရည်အသွေးနှင့်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုတို့ကြောင့်နိုင်ငံများစွာ၌အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရပြီး၎င်း၏ ဦး ဆောင်နည်းပညာနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အားသာချက်များကို ဦး တည်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်အပြင်ဘက်ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများတွင် Kangrun Sanitary Wares သည်ဥရောပနှင့်အမေရိကတို့တွင်ကြီးမားသောဈေးကွက်ဝေစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဥရောပနှင့်အမေရိကဈေးကွက်များတွင်အရောင်းရဆုံးနေရောင်ခြည်သုံးရေချိုးခန်းတံဆိပ်ဖြစ်လာသည်။
Wenzhou Kangrun Sanitary Wares Co. , Ltd သည်သန့်ရှင်းသောအသုံးအဆောင်များနှင့်ပြင်ပရေချိုးခန်းသုံးကော်လံထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုအထူးပြုသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည် faucet များ၊ ရေချိုးခန်းများ၊ ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်အသုံးအဆောင်များနှင့်အပြင်ဘက်ရေချိုးခန်းကော်လံများကိုပါ ၀ င်သည်။
အသုံးချမှုများတွင်အိမ်အလှဆင်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပြင်ပနှင့်အခြားနယ်ပယ်များစွာပါဝင်သည်။ ထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းပညာအများစုသည်အမျိုးသားမူပိုင်ခွင့်များရရှိပြီး SGS, CE နှင့် Third-party အသိအမှတ်ပြုကုမ္ပဏီများမှအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်။
အနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်သောအားဖြင့် Kangrun Sanitary Ware သည်စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာအရလိုက်နာသည်၊ ၀ န်ထမ်းများအားလေ့ကျင့်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆန်းသစ်မှုနှင့် ၀ န်ထမ်းတိုးတက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမာခံအဖြစ်အမြဲတည်ရှိနေပြီး၎င်းသည်နယ်ပယ်တွင် ဦး ဆောင်လျှောက်လွှာဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လာရန်ကြိုးပမ်းသည်။ သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများနှင့်အပြင်ပန်းရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများ
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Kangrun သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများစတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ အဖွဲ့အရွယ်အစားသည်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာသည်၊ စက်ရုံသည်ဧရိယာစတုရန်းမီတာ ၂၀၀၀၀ ကျော်၊ အလုပ်ရုံသည်စတုရန်းမီတာ ၈၀၀၀ ကျယ်ဝန်းသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ ၀ င်ငွေသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာခဲ့ပြီးအဆက်မပြတ်မှတ်တမ်းသစ်များတင်ခဲ့သည်။ Kangrun ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် core သည်“ ကျန်းမာရေး” နှင့်“ အာဟာရ” ပါ ၀ င်သောကော်ပိုရေးရှင်းယဉ်ကျေးမှုနှင့်အောင်မြင်မှုများအားလုံးသည်၎င်းနှင့်နီးစပ်သည်။
အဓိကအယူအဆ - ထုတ်ကုန်ပထမ၊ လက်တွေ့ကျ၊ ဆန်းသစ်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု
ကော်ပိုရေးရှင်း၏အမြင်: လုပ်ငန်း၏ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးမှု၊ လူမှုဘ ၀ တိုးတက်စေရန်လူမှုဖူလုံရေး
၀၁.Product ပထမ၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသေချာ၊ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်ကိုလေးစားပါ
၀၂။ ဆန်းသစ်တီထွင်ရန် ၀ န်ခံပါ၊ ထုတ်ကုန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုဂရုပြုပါ၊ The Times ၏လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ပါ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံကိုဆန်းသစ်ပါ
၀၃. မြေကြီးပေါ်သို့ဆင်းပါ။ တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်လှမ်း၊ အခက်အခဲများကိုကျော်လွှား။ မြင့်မားသောရည်မှန်းချက်ကိုသတိပြုပါ
၀ န်ထမ်းများအတွက်ဂရုစိုက်ပါ။ ၀ န်ထမ်းများအားလေ့ကျင့်ပေးပါ၊ ၀ န်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးကိုဂရုပြုပါ၊ ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင် ၀ န်းကျင်ရှိပါစေ
05. အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ပါ၊ ရှင်းလင်းသောပန်းတိုင်အစီအစဉ်ဆွဲပါ၊ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုအာရုံစိုက်ပါ
၎င်းကိုလူသုံး ဦး ဖြင့်အသေးစားလုပ်ငန်းအဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်ရောင်းအားကိုအဓိကထားသည်။
၎င်းသည်လူ ၁၀ ယောက်ပါသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာပြီးကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ရေးနေရာတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် Ningbo အရောင်းဌာနခွဲ၊ Ningbo Cyen Sanitary Ware Co. , Ltd.
စကေးကဆက်ပြီးတိုးချဲ့နေတယ်၊ ​​ကုမ္ပဏီရဲ့ ၀ န်ထမ်း ဦး ရေက ၅၀ အထိရှိလာပြီးထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံက ၁၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိတယ်။
၎င်းကို Wenzhou Kangrun Sanitary Wares Co. , Ltd. အဖြစ်တရားဝင်အမည်ပြောင်းပြီးမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။
အလုပ်ရုံစကေးသည် ၂၀၀၀ စတုရန်းမီတာသို့ထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့သည်
ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်းအရေအတွက်သည်လူ ၁၅၀ ကျော်ရှိသည်။
စက်ရုံသည်ဧရိယာစတုရန်းမီတာ ၂၀,၀၀၀ ကျော်၊ စတုရန်းမီတာ ၈,၀၀၀ ရှိသောအလုပ်ရုံသစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အမေရိကန်၊ မက္ကစီကိုသန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများနှင့်ပြင်ပထုတ်ကုန်ပြပွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Cologne ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားပစ္စည်းများ၊ စခန်းချကိရိယာများနှင့်ဥယျာဉ်ဘဝပြပွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပါ ၀ င်ခဲ့သည်
ကုမ္ပဏီ၏ရောင်းအားပမာဏသည်သန်း ၁၀၀ နီးပါးရှိပြီးဟိုင်နန် Sanya မြို့၌အဖွဲ့တည်ဆောက်ခြင်းကိုကုမ္ပဏီကစီစဉ်ခဲ့သည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ: ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်သမိုင်းကြောင်း ၁၃ နှစ်ရှိသည်၊ ပြီးပြည့်စုံသောရင့်ကျက်သောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
လက်မှတ်များ SGS, CE, WRAS, COC, TUV စသည်
အရည်အသွေးကောင်းခြင်းအာမခံချက်: ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းရေယိုစိမ့်မှုစစ်ဆေးခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးအရင်းအမြစ်၊ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမျက်နှာပြင်စစ်ဆေးခြင်း
ခေတ်သစ်ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက် စုဝေးမှုဧရိယာ၊ စစ်ဆေးရေးဧရိယာ၊ ထုပ်ပိုးမှု၊ ကုန်ချောဧရိယာစသည်တို့အပါအ ၀ င်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ